By Tachileik News Agency - December 26, 2008
​ ေဆာင်း​တွင်း​ေရာက်ြပီဆိုရင် ​ေနွး​ေထွး​မှုကို ယူရဖို့​ ဂံုနီအိတ်အ​ေဟာင်း​ေတွကို ရှာဝယ်ြပီး​ ​ေစာင်အြဖစ် အသံုး​ြပုခဲ့​ရတုန်း​က မိသား​စုရဲ့​ ြပဿနာက စား​ဝတ်​ေန​ေရး​တစ်ခုပါပဲ အဲ့​ဒီလို​ေလး​ေတွ အဆင်​ေြပ​ေစဖို့​ အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ မနက်မိုး​လင်း​ြပီဆိုရင် သား​သမီး​ေတွကို စိတ်မချ​ေသာ်လည်း​ မြဖစ်မ​ေန အိမ်မှာထား​ခဲ့​ကာ ဝမ်း​စာ​ေရး​အတွက် တစ်​ေန့​တာြပီး​တစ်​ေန့​ ြဖတ်သန်း​ခဲ့​ရတယ် မုန်တိုင်း​တစ်ခုလိုပါပဲ ဘဝက ြပင်း​ထန်ခဲ့​တယ်.. ဘဝရဲ့​ တစ်​ေန့​တာ မှာ ပင်ပန်း​မှု့​ေတွကို​ေြဖ​ေဖျာက်​ေစဖို့​ အလုပ်က​ေန အိမ်ကို အြပန်မှာ အရက်က​ေလး​ တစ်ြမြမနဲ့​ ​ေသာက်လာကာ မူး​ရင်ဆဲဆိုမှု​ေတွ လိုအပ်တာထက်ပိုခဲ့​တာ​ေတွကို ရင်ဆိုင်ခဲ့​ရတာ အ​ေဖ့​ရဲ့​ မူး​ခဲ့​ချိန်တုန်း​က မိသား​တစ်စုလံုး​ပါပဲ…။ အ​ေဖ့​ကို အြပစ်​ေြပာ​ေနတာ​ေတာ့​ ဟုတ်ပါဘူး​….အ​ေဖအရက်​ေသာက်တယ် ဆိုတာအ​ေဖအလုပ်လုပ်ရတဲ့​ အလုပ်က ​ေရတွင်း​တူး​ရတဲ့​အလုပ်​ေလ… သူများ​ေတွလို့​ အဝစီတွင်း​တို့​ ​ေြမြကီး​ကို တူး​ရတဲ့​ ​ေရတွင်း​လို့​မဟုတ်ပါဘူး​….။ ခက်ခဲမာ​ေြကာလှတဲ့​ ​ေကျာက်​ေရတွင်း​ကို တူး​ရတဲ့​အလုပ်​ေပါ့​…။ ဒီြကား​ထဲ အဆင်​ေြပရင်​ေြပသလို ဘ​ေလာက်အုတ်ရိုက်ဆိုလဲ အ​ေဖရိုက်ခဲ့​တယ် ကျ​ေနာ်တ…
By Tachileik News Agency - December 22, 2008
အ​ေမ့​ရင်ကိုနှုတ်ဆက် ခံစား​ချက်မဲ့​တဲ့​ ဒီနိုင်ငံမှာ ပညာရှာရင်း​ကျွန်ခံ သား​တို့​ဘဝကို ြမုပ်နှံခဲ့​ြပီ...အ​ေမ
ပူြပင်း​လှတဲ့​ ​ေနွလွင်ြပင်​ေအာက် အထီး​ကျန်ဆိုတဲ့​ သူငယ်ချင်း​နဲ့​ အ​ေမ့​ကိုလွမ်း​လို့​ မျက်ရည်ကျရင်း​
သား​စိတ်​ေပျာ့​တယ် ဆိုမလား​....အ​ေမ အ​ေမ​ေရ ​ေပျာ်တဲ့​သူလည်း​ ​ေပျာ်ြကလိမ့်​မယ် ​ေလး​လပိုင်း​ရဲ့​ အလယ်ရက်မှာ နှုတ်ခမ်း​အြပံုး​ နှလံုး​သား​မျက်ရည်နဲ့​ အ​ေပျာ်တစ်ခုကို ဖန်ဆင်း​ခဲ့​ရတယ် အ​ေမ မီး​ခဲများ​ နီရဲမယ့်​ေန့​အထိ ဆား​မပါတဲ့​ ဟင်း​တစ်ခွက်ကို ​ေလး​နှစ်ြပည့်​ေအာင် သည်း​ခံြပီး​ရင် အ​ေမရယ် အ​ေမ့​လက်ရာ ဟင်း​တစ်ခွက်ကို ငတ်ငတ်ြပတ်ြပတ် စား​ေသာက်ချင်ပါရဲ့​ ~~~ကိုြကီး​~~~ ​ေခတ္တ - စကင်္ာပူ ( အ​ေမကိုချစ်​ေသာ သူတိုင်း​ခံစား​နား​လည် နိုင်ပါ​ေစ။ ) ဝန်ခံချက် ။ ။ အ​ေမ ဆိုတဲ့​ဒီကဗျာ​ေလး​ဟာ လွန်ခဲ့​တဲ့​ငါး​နှစ်​ေလာက်က ကျွန်​ေတာ့်​ သူငယ်ချင်း​တစ်​ေယာက် ​ေရး​ထား​တာပါ။ (​ေနြခည်မင်း​သစ်) ဆိုတဲ့​က​ေလာင်အမည်နဲ့​ မဂ္ဂဇင်း​တစ်ခုမှာ ​ေဖာ်ြပခဲ့​ဘူး​ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း​အမည် ကို​ေတာ့​ မမှတ်မိ​ေတာ့​ပါ။ နိုင်ငံရပ်ြခား​မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင် ​ေနြကတဲ့​သူတိုင်း​ မည်သူမဆို ြကံု​ေတွ့​ရင်ဆိုင်ရတဲ့​ အ​ေြခအ​ေန​ေတွကို အမှန်တကယ်် ​ေရး​ဖွဲ့​ထာ…
By Tachileik News Agency - December 21, 2008
မနက်မိုး​လင်း​အထိ အိပ်ပုပ်ြကီး​တတ်တဲ့​ ငါ့​အတွက်မင်း​က နိုး​စက်် ​ေလး​ေပါ့​…..
By Tachileik News Agency - December 20, 2008
ရှင်ခန်း​မည်သူ ြဖတ်မည်နည်း​။ ။ ။ ။
​ေခတ္တ - စကင်္ာပူ
ဒီကဗျာ​ေလး​ကို စကင်္ာပူ​ေရာက် ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ အကိုြကီး​မှ ​ေပး​ပို့​ေသာ ကဗျာြဖစ်ပါသည် အား​ေပး​ပါအံုး​ခင်ဗျာ
By Tachileik News Agency - December 18, 2008
အချစ်ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​ထက် ပိုတန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ စကား​လံုး​တစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ သံ​ေယာဇဉ် ​ေပါ့​…။ အချစ်ဆိုတာ ​ေရ​ေနွး​ပူလိုပါပဲ သံုး​တတ်ရင် အမျိုး​မျိုး​သံုး​လို့​ရတယ် မသံုး​တတ်ရင်​ေတာ့​ အပူ​ေလာင်ြပီ သာမှတ်..။ ချစ်ြပီး​ရင် အမုန်း​ဆိုတာ လာစြမဲပါပဲ။ သံ​ေယာဇဉ်ဆိုတာက​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်ကို ​ေအး​ြမတဲ့​ ​ေတာင်ကျ​ေရလိုပါ….။ အ​ေရာင်​ေတွမပါတဲ့​ ခင်မင်ြခင်း​ေတွမှာ အြကီး​မား​ဆံုး​က သံ​ေယာဇဉ်​ေပါ့​…။ သံ​ေယာဇဉ်ြကီး​မား​လွန်း​လို့​ အ​ေဖ နဲ့​ အ​ေမ အစ်ကို​ေတွ အစ်မ​ေတွ ညီ​ေလး​ေတွ ညီမ​ေလး​ေတွ သူငယ်ချင်း​ေတွ နဲ့​ မခွဲြခင်ဘူး​…။ ငါ​ေသသွား​ရင် သူတို့​ဘယ်လို​ေနမလဲ၊​ ဒုက္ခ​ေရာက်သွား​ြကမှာလား​၊​ စား​ဝတ်​ေနထိုင်​ေရး​အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ြကမလဲ.. အဲ့​ဒီလို အ​ေတွး​ေတွ နစ်မွန်း​ေနရင်း​ ငါမရှိရင်ဘယ်လို​ေနမလဲ ငါ​ေသသွား​ခဲ့​ရင် ငါ​ေသသွား​ခဲ့​ရင်….. အ​ေတွး​ေတွက အိပ်ပျက်ည​ေတွမှာ မက်ခဲ့​ရတဲ့​ ​ေချာက်ချား​အိပ်မက်​ေတွလိုပါပဲ… ဒါ​ေတွက ြကီး​မား​တဲ့​ သံ​ေယာဇဉ်​ေတွ​ေြကာင့်​ပါ..။ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို လွတ်လပ်မှု​ေတွကို ချိတ်ပိတ်ခဲ့​တဲ့​ေနာက် ​ေအး​ြမလှတဲ့​ သံ​ေယာဇဉ်ြကီး​ထဲမှာ အ​ေြခချ​ေနထိုင်လာခဲ့​ရာ ငယ်စဉ်ကလို ​ေပျာ်စရာ​ေတွ​ေကာင်း​လာသလ…
By Tachileik News Agency - December 17, 2008
By Tachileik News Agency - December 06, 2008
တစ်ချိန်တုန်း​က​ေတာ့​ ငါဟာဘုရင်​ေပါ့​… အရာရာတိုင်း​ကို စိုး​မိုး​နိုင်တယ်… အခု​ေတာ့​ အလိုရှိတိုင်း​ အသံုး​ချဖို့​ သခင်မအပါး​ခစား​ေနရတဲ့​ အမူ​ေတာ်ထမ်း​ မင်း​ခ​ေယာကင်္ျား​အြဖစ်သို့​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ရတယ်..။ သခင်မအလိုကျ ငိုြပဆို ငိုြပခဲ့​ရတယ်..။ ရယ်ြပဆိုလည်း​ရယ်ြပခဲ့​ရတယ်..။ အရာရာတိုင်း​မှာ သခင်မအလိုကျပါ..။ သခင်မရဲ့​ မျက်နှာ​ေတာ်က အ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​အြပံုး​ေလး​ေတွ ​ေပျာက်ပျက်သွား​မှာ​ေတာ့​ စိုး​ရိပ်မိတယ်…. နဂါး​မျက်​ေစာင်း​ကို ပိုင်ဆိုင်ထား​တဲ့​ သခင်မရဲ့​ အြကည့်​ကို ရင်မဆိုင်ဝံ့​ပါဘူး​…။ ​ေပျာ်ရွှင်မှုဆိုတဲ့​ အရာ​ေတွကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​မ​ေပး​ချင်လည်း​ေနပါ..။ စစ်မှန်​ေသာ ကျွန်​ေတာ်မျိုး​၏ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အိမ်မက်​ေတွကို သခင်မရဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အတု​ေတွနဲ့​ မဖျက်ဆီး​ပါနဲ့​လား​…။တစ်ကယ်ဆိုရင် ကျွန်​ေတာ်မျိုး​က အရှင်သခင်မရဲ့​ မင်း​ခ​ေယာကင်္ျား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်ပါ……
ရက်စက်​ေသာ နှင်း​ (​ေဆာင်း​)
By Tachileik News Agency - December 04, 2008
ဒီဇင်ညများ​ရဲ့​ ဘုရား​ေကျာင်း​က ခရစ္စမတ် သီချင်း​တိုက်သံ​ေတွကို ြကား​ေယာင်မိတိုင်း​ အလွမ်း​ကိုယ်စီနဲ့​ လွမ်း​ေနြကရမှာ ​ေဝး​ကွာသူတို့​ရဲ့​ သဘာဝပါပဲ​ေလ……။ ဒီလို အချိန်မျိုး​ေတွ​ေပါ့​…။ သူနဲ့​အတူ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်….။ အခု​ေတာ့​ ဒီလိုအချိန်မျိုး​ေတွမှာ တစ်​ေယာက်တည်း​လွမ်း​ေနရတယ်​ေလ…။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို ​ေပး​သွား​ရစ်ခဲ့​ြပီး​မှ အခု​ေတာ့​ တစ်ြခား​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ရင်ခွင်ထဲမှာ သူ​ေနွး​ေထွး​စွာ ​ေပျာ်ြမူး​ေန​ေလရဲ့​…ရက်စက်လိုက်တဲ့​ ကံြကမ္မာ လွှင်​ေမျှာခဲ့​တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​….။ တစ်စစီြပန့်​ကျဲခဲ့​တဲ့​ သဲမှုန်​ေတွလို ငါဟာ တန်ဖိုး​မဲ့​ခဲ့​ရ​ေလြပီ….။ ထား​ခဲ့​ပါ​ေတာ့​ေလ…. ရက်စက်​ေသာ နှင်း​စက်များ​ေအာက်မှာ ငါဟာ က​ေဝတစ်​ေကာင်လို အသက်မဲ့​ေနဆဲ​ေပါ့​…။ အလွမ်း​ေတွကို နိုး​ဆွ​ေပး​တဲ့​ ဒီဇင်ဘာညတိုင်း​မှာ​ေတာ့​ လွမ်း​လို့​ကျတဲ့​မျက်ရည်​ေတွက နှင်း​မှုန့်​ေလး​ေတွအတိုင်း​သာ…….